“Guud ahaan Kuraasta ka bannaan golaha shacabka oo doorashadooda la qabanayo”. Sidaas waxa tiri…. | “Guud ahaan Kuraasta ka bannaan golaha shacabka oo doorashadooda la qabanayo”. Sidaas waxa tiri…. | Hal Sheegaha La Hubo
“Guud ahaan Kuraasta ka bannaan golaha shacabka oo doorashadooda la qabanayo”. Sidaas waxa tiri….
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka ayaa sheegay in ay qaban doonaan Doorashada dhamaanba Kuraasta kale ee ka dhiman Golaha Shacabka.
Guddiga ayaa sheegay in saddex Kursi ay ka dhiman tahay Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka, waxayna Guddiga tilmaameen in Saddex kursi doorashooyinkooda ay ka kala dhici doonaan Magaalooyinka Cadaado, Kismaayo iyo Muqdisho.
Guddoomiyaha Guddiga Madaxa bannaan ee doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo loo yaqaan Xaliimo Yareey oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in cabashadii ka taagneyd qabsoomida doorashada Saddex kursi la xaliyay.
Maalintii shalay ayeey aheyd markii magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle lagu soo qabtay doorashada mid ka mid ah kuraastii ka bannaaneyd baarlamaanka, waxaana ku guuleysay Xildhibaan Nuur Iidoow Beyle.